Ergaa Kabajamoo Afyaa’ii Caffee Oromiyaa
Kab.Addee  Sa'adaa Abdurahmaan
Caffeen Oromiyaa qaamolee mootummaa sadan keessaa isa tokko ta’ee qaama seera baasaafi qaama abbaa aangoo siyaasaa isa olaanaa Naannichaa akka ta’e ni beekama. Caffeen bu’uura Heera Mootummaa Naannichaa Fooyya’ee Bahe Keewwata 48 (1) jalatti akkaataa tumameen filannoo Biyyoolessaafi Naannolee waggaa shan shaniin karaa bilisaa, amanamaafi sagaleen uummataa iccitiin itti kennamuun filatamee hundaa’uu dha.
Naannoon Oromiyaa, Naannolee Filannoo 179 kan qabdu yoo ta’u naannoo filannoo tokkorratti kaadhimamtoonni sadi sadi dhaaba tokko bakka bu’uun dorgomuu danda’u. Caffeen Mootummaa Naannoo Oromiyaa waliigalaan teessoo 537 qaba. Hundeeffama isaarraa hanga xumuura bara 2007tti Caffeen Baroota Hojii afur dabarsee jira. Bu’aa filannoo marsaa shanaffaa bara 2007 gaggeessineenis Caffeen Bara Hojii 5ffaa Hagayya 14/2007 adeemsisuun hojiisaa eegalee jira.
Caffeen aangoo Heera Naannichaatiin Keewwata 49 jalatti kennameef irratti hundaa’uun, seerota adda addaa qulqullina isaanii eeggatan tumuu, karooraafi baajata qaamolee mootummaa raaggaasuun raawwiisaa hordofuufi to’achuun, dandeettii raawwachiisummaa qaamolee isaafi Manneen Maree Uummataa sadarkaan jira cimsuun ergama hojii bakka bu’ummaa ummataa gahumsaan akka bahataniif deeggarsa barbaachisaa ta’e ni taasisa. Caffeen hojii hordoffiifi too’annoo qaamolee mootummaarratti taasisuun ummanni naannoo keenyaa misooma ariifachiisaafi itti fufiinsa qabu, ijaarsa sirna demookraasiifi nageenya amansiisaa mirkaneessuuf sochii taasifamu keessatti bal’inaan akka hirmaatuufi bu’aasaarraayis akka fayyadamu cimee kan hojjetu ta’a. Hundaa ol ammoo, rakkoolee bulchiinsa gaarii ummanni naannoo keenyaa bal’inaan kaasaa jiruuf deebii hatattamaa kennuuf yeroo kamirraayyuu bifa adda ta’een xiyyeeffannaa kennee hojjetaa jira.